သန်း ၆၀ နှင့် ဘာသာရေး ပလက်ဖောင်း | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Apa mahu lagi Myanmar Muslims dan Rohingyas? (= What do you want more Myanmar Muslims and Rohingyas?)
“ဗမာမွတ်စလင်တွေဆိုတာလည်းဗမာပါပဲ” ဖ-ဆ-ပ-လ ပထမဆုံးသော နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံကြီး »
M-Media‘s status.သန်း ၆၀ နှင့် ဘာသာရေး ပလက်ဖောင်း (The Voice Weekly) (ပေါ်လင်းဦး)
စာရေးသူတို့သည် ကိုးကွယ်မှုနှင့် ပတ်သတ်လျှင် “သူမှားသည် ၊ ကိုယ်မှန်သည်” ဟု အခြေခံအားဖြင့် ချဉ်းကပ်လေ့ ရှိကြသည်။ ယင်းကား မည်သည့် ဘာသာဝင်မဆို ချဉ်းကပ်လေ့ရှိသော ပုံစံ ဖြစ်သည်။ လူ့သဘောအရ သဘာဝလည်းကျပါသည်။ သို့သော် ယင်းချဉ်းကပ်မှု ပုံစံသည် အခန့် မသင့်လျှင် မှားသူနှင့် မှန်သူမှာ ရန်ဖက်၊ ရန်သူအဖြစ် ရှုမြင်သွားစေနိုင်သည့် လမ်းကြောင်းအထိ တွန်းပို့နိုင်ပါသည်။ ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံ တွင်လည်း ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာပင်ဖြစ်စေ ၊ အစ္စလာမ်ပင်ဖြစ်စေ၊ ဟိန္ဒူပင်ဖြစ်စေ၊ ခရစ်ယာန်ပင်ဖြစ်စေ ယင်းပုံစံဖြင့်သာ ချဉ်းကပ်နေကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ငါနှင့်မတူ ၊ ငါ့ရန်သူ ဆိုသော သဘောတရားနှင့် အတူတူပင် ဖြစ်သည်။
စာရေးသူ အနေဖြင့် တင်ပြရလျှင် လူတို့သည် ကိုးကွယ်မှုနှင့် ပတ်သတ်လျှင် “သူမှားသည် ၊ ကိုယ်မှန်သည်” ဟု အများအားဖြင့် ချဉ်းကပ် လေ့ရှိသော်လည်း စေ့စေ့ပေါက်ပေါက် လေ့လာလျှင် ယင်းအမြင်မှာ လွန်စွာ အခြေမခိုင်လှသည် ကိုလည်း တွေ့ရသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ခရစ်ယာန် မိဘနှစ်ပါးမှ မွေးခဲ့သော် ယနေ့ကိုးကွယ်နေသော ဘာသာမှာ ခရစ်ယာန် ဖြစ်ရန် ၉၉ ရာနှုန်း သေချာမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ဘာသာ တရားများကို မှားသည် ဟုယုံကြည်သူ ဖြစ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိဘနှစ်ပါး မှ မွေးခဲ့သော် ယနေ့ကိုးကွယ်နေသော ဘာသာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်ရန် ၉၉ ရာနှုန်း သေချာမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ဘာသာတရားများကို မှားသည်ဟု ယုံကြည်သူ ဖြစ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည် အစ္စလာမ် မိဘနှစ်ပါးမှ မွေးခဲ့သော် ယနေ့ကိုးကွယ်နေသော ဘာသာမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဖြစ်ရန် ၉၉ ရာနှုန်း သေချာမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ဘာသာတရား များကို မှားသည်ဟု ယုံကြည်သူ ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤချဉ်းကပ်မှု ပုံစံသည် “သူမှားသည် ၊ ကိုယ်မှန်သည်” ဟု သူ့ဘက် ၊ ကိုယ့်ဘက် ခွဲခြား စဉ်းစားခြင်းမဟုတ်ပေ။ မိမိတစ်ဖက်တည်းကို “လူကောင်း၊ လူဆိုး” ခွဲခြားစဉ်းစားခြင်းနည်း ဖြစ်သည်။ ဘာသာရေး အုပ်စုတိုင်းတွင် ကောင်းသူရော၊ ဆိုးနေသူရော ရှိနေသည်မှာ လက်တွေ့အမှန် တရားလည်း ဖြစ်သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် မည်သည့် ဘာသာဝင်ပင်ဖြစ်စေ ကောင်းသူ များ အချင်းချင်းပူးပေါင်း မနေနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိ။ မည်သည့် ဘာသာဝင် ပင်ဖြစ်စေ အေးအေး ချမ်းချမ်း နေလိုသော သူများအချင်းချင်း အတူယှဉ်တွဲ မနေနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိ။ မည်သည့် ဘာသာဝင်ပင်ဖြစ်စေ မျှတသူများ အချင်းချင်း အတူယှဉ်တွဲ မနေနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိ။ မည်သည့် ဘာသာဝင် ပင်ဖြစ်စေ သမာသမတ်ကျသူများကို မကြည်ဖြူနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိ။ မည်သည့် ဘာသာဝင်ပင်ဖြစ်စေ ရက်ရောပေးကမ်းသူများကို မလိုလား နိုင်စရာ အကြောင်းမရှိ။ မည်သည့်ဘာသာဝင် ပင်ဖြစ်စေ စိတ်နှလုံး မြင့်မြတ်သူများကို မလေးစားနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပေ။
ထို့ကြောင့် ပြဿနာ တစ်ရပ်အား ချဉ်းကပ်ရာတွင် “ဘယ်ဘာသာဝင်တွေကြောင့်” ဟု လက်ညှိုးမထိုးစေလိုဘဲ “ဘယ်လိုသူတွေကြောင့်” ဟုသာ ရှုမြင်စေချင်ပါသည်။ တစ်ဆက်တည်း တင်ပြရလျှင် “အစွန်းရောက် မျိုးချစ်စိတ်သည် ဒီမိုကရေစီ၏ ထောင်ချောက်ဖြစ်သည်” ဆိုသော စကားကို သန်း ၆၀ တို့ သတိပြုစေချင်သည်။
This entry was posted on May 12, 2013 at 12:16 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.